निजी खर्चमा गरिवी तथा विपन्न चार सयलाइ कम्बल वितरण – Shirish News
महोत्तरी,१६ माघ ।
पिपरा गाउपालिका वडा नं. १ खैरवाका पुरन रामको श्रीमति,तिन छोरी र एक छोरा छन् । गरिवी तथा विपन्नताले खान समेत धौ धौ पर्ने रामको परिवार चिसोमा कठ्यांग्रिन वाध्य थिए । उनलाई गाउकै युवा राहुल पाण्डेय दम्पतीले कम्बल दिएका छन । उनी जस्तै सोहि वडाका थप चारसय विपन्नले पाण्डेय दम्पतिको हातबात कम्बल पाउदा औधी खुशी देखिए ।
समाजवादी पार्टीका जिल्ला युवा अध्यक्ष राहुल कुमार पाण्डेयले निजी खर्चमा आफ्नो वडाका चारसय विपन्नलाई कम्बल वितरण गरेका छन । पिपरा गाउपालिका वडा नं. १ को खैरवा,एकरहिया,गम्हरिया र ढेकहा गरि चार टोलकै विपन्न चारसय व्यक्तिलाई उनले कम्बल वितरण गरेका हुन ।
चिसोले गरिव तथा विपन्नलाई सकस भैरहदा निजी खर्चमै कम्बल खरिद गरि सपरिवार विपन्नहरुलाई वाडेको युवा अध्यक्ष पाण्डेयले वताए । उनले विपन्नलाइ थोरै राहत दिन समेत कुनै योजना वा बजेटकै आवश्यक्ता नरहेको र हुने खाने हरेक व्यक्तिले थोरै थोरै रकम समाजसेवामा खर्च गर्न सके गाउ घरमा कोहि चिसोमा कठ्यांग्रिनु नपर्ने बताए । युवा अध्यक्ष पाण्डेय वेला वेलामा सामाजिक कार्यमा तल्लिन देखिने गरिएका छन ।